२३ वर्षीय ‘लिपि’ लेखक- साहित्य/विविध - कान्तिपुर समाचार
पुस १२, २०७८ अर्जुन राजवंशी
बिर्तामोड — दिगो हुने कीर्ति राख्न केही गर्ने चाहना भएका एक युवक २३ वर्षमै आफ्नो जातिका भाषा विज्ञ बनेका छन् । झापाको बाह्रदशी–२ राजगढका शिव मुर्मु लोपोन्मुख सन्थाल जातिका पहिलो ‘लिपि’ लेखक बनेका हुन् ।
स्नातक अध्ययनरत उनले नेपालमा बसोबास गर्ने अल्पसंख्यक सन्थालका लागि ‘ओलोचिकी’ लिपिमा वर्णमाला तयार गरेका छन् । ‘शिवु भाइले सन्थाली भाषाबाट लिपि तयार गरेका हुन्,’ नेपाल सन्थाल आदिवासी उत्थान संघ झापाका अध्यक्ष लखन हेमरमले भने, ‘हाम्रो जाति र भाषा नै लोप हुने डर रहेको बेला नयाँ पुस्ताले यो बहुत ठूलो काम गरेका हुन् ।’
शिवुलाई लिपि तयार गर्न करिब ५ वर्ष लाग्यो । देवनागरीबाट पढेका उनलाई ओलोचिकी सिक्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्‍यो । नेपालमा सन्थाली भाषाको अध्ययन छैन । ओलोचिकी लिपि जानेका भेटिँदैनन् । तर, आफ्नो जातीय लिपि सिक्ने र लेख्ने हुटहुटीले उनलाई सफलता प्राप्त भएरै छोड्यो । जातीय लिपि सिक्न उनले भारत झारखण्डका विद्वान्हरूलाई सम्पर्क गरे । इन्टरनेटका कक्षाहरू लिए । सन्थाली पुस्तकहरू मगाएर पढे । लगातारको प्रयासपछि लिपि सिक्न सफल भए ।
‘हाम्रो भाषामा किताब रहेनछ,’ मुर्मुले भने, ‘जति सक्छु लिपि लेख्छु भनेर लागें ।’ उनले ‘सन्थाली वर्णमाला’ नाम दिएर लिपि पुस्तक तयार पारेका हुन् । संस्कार, भाषालगायत समेटेर पुस्तकको दोस्रो संस्करणसमेत तयार गरेका छन् ।
‘यसपालिको जनगणनामा हामीले ओलोचिकी लिपिलाई नै टिपोट गरायौं,’ अगुवा देवान टुडुले भने, ‘आफ्नै भाषा, लिपि हुँदाहुँदै पनि स्कुलमा पढाइ नहुँदा हाम्रा पुस्ताले ओलोचिकी लिपि सिक्न/पढ्न पाएका छैनन् ।’ उनका अनुसार जिल्लाका दुई विद्यालयमा सन्थाली भाषाको पठनपाठन हुन्थ्यो । हल्दिबारीस्थित राष्ट्रिय एकता प्रावि र कोरोबारीस्थित आधारभूत जनकल्याण प्राविमा । तर, अहिले दुवैमा बन्द छ ।
‘करिब एक सय जना सन्थाली विद्यार्थीलाई आफ्नै लिपिबाट पठनपाठन गराउँदै थियौं । राम्रो भएको थियो । घरमा बोल्ने भाषाबाटै स्कुलमा पनि पढ्न पाउँदा विद्यार्थीले पढाएको राम्ररी बुझ्थे पनि,’ शिक्षक दीपक हेमरमले भने, ‘२०६४ देखि करिब ४ वर्ष जति ओलोचिकी लिपिबाट पढायौं । त्यसपछि पाठ्यपुस्तक आएन,  कतैबाट कुनै सहयोग पनि भएन । अनि, पठनपाठन नै बन्द भयो ।’ सरकारी बेवास्ताका कारण सन्थाल समुदाय पिछडिएको लखन हेमरमको आरोप छ ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०८:१२
अब कांग्रेसले जवाफ दिनुपर्छ
यस महाधिवेशन विचारभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित भएको आरोप कांग्रेसले सहज रूपमा स्विकार्नुपर्छ । र, हिजो आफैंले गरेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर खोज्नुपर्छ, अनि विनम्रतापूर्वक त्यसबारे जनतालाई बताउनुपर्छ ।
पुस १२, २०७८ प्रदीप पौडेल
महाधिवेशनको अर्थ हो— नेतृत्व विकास, हस्तान्तरण र नवीन कार्यदिशा । हरेक राजनीतिक दलको महाधिवेशनमा यी विषयहरू कसरी उठे भन्ने सवालले सम्बन्धित राजनीतिक दलको चरित्र चित्रण गर्छ । त्यसैले वैचारिक अन्योललाई चिरेर महाधिवेशनले दलको भविष्य विचारधारात्मक आलोकमा निर्देशित गर्छ । बहुदलीय व्यवस्थामा राजनीतिक दल नै अग्रणी नेतृत्वमा हुने भएकाले तिनको नेतृत्व शैलीले दूरगामी अर्थ र महत्त्व राखेको हुन्छ ।
महाधिवेशनमा भएका गहन छलफल र कार्यदिशा निर्माण, निर्वाचित नयाँ नेतृत्व र तिनले बोक्ने विचार, जिम्मेवारीबोध तथा कार्यशैली देशको भविष्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको हुन्छ । देश विकासको प्रारुप पनि यिनै दलले महाधिवेशनमार्फत ल्याउने म्यान्डेट, वैचारिक स्पष्टता र नेतृत्व कौशलसँग गाँसिएको हुन्छ । त्यसैले कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलको महाधिवेशन के कसरी सम्पन्न भयो भन्नेबारे बृहत् छलफल र समीक्षा हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन भर्खरै सम्पन्न भएको छ । महाधिवेशनले आगामी चार वर्षका लागि पार्टी नेतृत्व स्थापित गरेको छ । यही नेतृत्वले कांग्रेसको निकट भविष्यको रूपरेखा तय गर्नेछ । यस नेतृत्वको आगामी यात्रा स्वयम् कांग्रेस, लोकतन्त्र र समग्र नेपाली समाजका लागि निकै अर्थपूर्ण रहनेछ । लामो लोकतान्त्रिक परम्परा धानेको कांग्रेसलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने जिम्मेवारी नवनिर्वाचित नेतृत्वलाई छ । २०७२ को नयाँ संविधान निर्माणपछि उक्त संविधानले निर्दिष्ट गरेको समावेशी लोकतन्त्रान्त्रिक मूल्य र मान्यताको व्यावहारिक पक्षसँग जोडिएर सम्पन्न भएको महाधिवेशनले नेपाली कांग्रेस संविधानप्रति पूर्ण प्रतिबद्ध छ भन्ने थप पुष्टि गरेको छ ।
कांग्रेस महाधिवेशनभन्दा केही समयअघि मात्रै एमालेले
आफ्नो महाधिवेशन नारायणी किनारमा कार्यकर्ता उतारेर सम्पन्न गर्‍यो, त्यही नारायणी किनारको भीडलाई देखाएर उसले आफ्नो महाधिवेशनको भव्यता स्थापित गर्ने कोसिस गर्‍यो । तर, कार्यकर्ता पंक्तिको विवेकलाई बन्धक राखेर त्यस पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उनको निगाह प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पद पाए भने सिंगो नेपालको लोकतान्त्रिक जनसंख्याले ग्लानिले मुख छोप्नुपर्ने स्थिति पैदा भयो । एउटा व्यक्तिको सनक, लहड र निगाहमा कार्यकर्ता पंक्ति आश्रित हुनुपर्ने परिस्थिति सामन्तवादी व्यवस्थामा मात्रै सम्भव हुन्छ ।
त्यसैले सहज रूपमा भन्न सकिन्छ, एमालेले लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिको हुर्मत लिएर नारायणी किनारबाट फर्किएको छ । कतिपय विश्लेषकले त्यो महाअधिवेशन नभएर ‘देवत्व घोषणा सभा’, ‘कुम्भ मेला’ जस्ता आरोप पनि लागाए । स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज गरेर ओलीको ठाडो निर्देशनमा भएको नेतृत्व–घोषणा पञ्चायती शैलीभन्दा कठोर र निर्लज्ज देखियो । फरक विचार र मतको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई निषेध गरियो । स्तब्ध महाधिवेशन प्रतिनिधि, आम कार्यकर्ता र जनताका लागि चितवन महाधिवेशनले एमालेभित्र लोकतन्त्र सकिएको घोषणा गर्‍यो ।
त्यसविपरीत नेपाली कांग्रेसले भृकुटीमण्डपमा लोकतान्त्रिक आचरण प्रस्तुत गर्दै जसरी नेतृत्व पंक्ति छान्ने पद्धतिलाई आफ्नो सैद्धान्तिक मार्गबाट विचलित नभई पूरा गर्‍यो, यसबाट कांग्रेस लोकतन्त्रप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ भन्ने पुनर्पुष्टि भएको छ । यतिबेला अर्को कम्युनिस्ट घटक माओवादी केन्द्रको समेत महाधिवेशन जारी छ । नेतृत्व चयनको तीन दशकभन्दा लामो अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी विरासत बोकेको माओवादी केन्द्रले यस महाधिवेशनमा पनि लोकतान्त्रिक चरित्र प्रदर्शन गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्न । त्यसैले अनेक सीमितता र समस्याका बावजुद आजका दिनमा नेपाली राजनीतिक दलमध्ये कांग्रेसले मात्रै आफूलाई लोकतान्त्रिक पार्टी भन्ने हैसियत राख्छ, जसलाई यो महाधिवेशनले थप पुष्टि गरेको छ ।
लोकतन्त्रको सौन्दर्य विधि–विधानको पालना र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाट नेतृत्वको चयन गर्नु हो । कांग्रेसको पछिल्लो विधानले महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र र समुदाय, खस–आर्य, जनजातिलगायतको सहभागिता र समावेशीपूर्ण नेतृत्व विकासलाई स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट सुनिश्चित गरेको छ । यसले कांग्रेसको आन्तरिक पार्टी जीवनमा पनि समावेशी लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई थप व्यावहारिक बनाएको छ । बाध्यकारी रूपमा समावेशितालाई स्वीकार गरेको नभई नीतिगत तहमै कांग्रेसले समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ । स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको आधारमा नेतृत्व क्षमता भएकाहरूलाई स्थापित गर्दै परिवर्तनका पक्षधरहरूका आवाजलाई कांग्रेसले लोकतान्त्रिक जनमतलाई महसुस हुनेगरी संस्थागत गरेको छ । यसबाट यो पार्टी परिवर्तन चाहनेहरूका लागि अझ खुला भएको र क्षमता, दक्षताको आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूलाई कुनै छेकबार नभएको थप प्रमाणित भएको छ ।
कांग्रेस विश्वास गर्छ— लोकतन्त्रको संस्थागत विकास गरेर मात्रै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता सम्भव छ र यही व्यवस्थामार्फत मात्रै आम जनताका आवश्यकता पूरा गर्न सकिन्छ । यही प्रणालीका लागि कांग्रेसले आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै बारम्बार संघर्ष गर्दै आइरहेको छ । त्यसैले पार्टी जीवनको निरन्तर विकास र नेतृत्व चयनका क्रममा यस महाधिवेशनमा स्वेच्छाचारिताका सामान्य दृश्यहरू पनि कसैलाई आभास भएन । यसले नेपाली कांग्रेस लोकतन्त्र, परिवर्तन र नयाँ नेतृत्व विकासको पक्षमा विचलित छैन भन्ने सन्देश दिएको छ । यो महाधिवेशन विगतका अन्य महाधिवेशन भन्दा फरक रह्यो ।
वडा, नगर, प्रदेशसभा क्षेत्र र जिल्लामा भएका र महाधिवेशन प्रतिनिधि निर्वाचन सबैमा युवा सहभागिताको वर्चस्व रह्यो र यसको प्रभाव केन्द्रीय तहसम्म कायम भयो । नेतृत्व पंक्तिमा पुरानै अनुहार दोहोरिने अड्कलबाजी गलत ठहरिए । युवाहरूको ठूलो पंक्तिले निर्वाचित भएर कांग्रेस हाँक्न सक्ने सन्देश दियो । आम जनतामा स्थापित कार्यकर्ताप्रतिको दृष्टिकोण बदलियो । उत्साहजनक सहभागिता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पार्टीको गतिशीलतालाई अझ सशक्त बनायो । यो गतिशीलता केवल युवा वा निश्चित उमेर प्रतिनिधित्वको मात्र नभई कांग्रेसको वैचारिक गतिशीलतको खोजीका लागि हो भन्ने सन्देश आम रूपमा स्थापित भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको विगतका महाधिवेशनबारे विज्ञ र विश्लेषकबाट यथेष्ट चर्चा र प्रशंसा भएका छन् । आफ्नो प्रत्येक महाधिवेशनमा समयसापेक्ष नयाँ विचार र एजेन्डा तयार गरेको कांग्रेसले यस महाधिवेशनमा पनि थप वैचारिक बहस गर्छ भन्ने अपेक्षा सर्वत्र थियो । वैचारिक क्रान्तिका लागि आह्वान गरिएको पहिलो महाधिवेशन हुँदै १३ औँ महाधिवशेनसम्म आइपुग्दा लोकतन्त्रको स्थापनादेखि वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनसम्म कांग्रेसको मुख्य एजेन्डाका रूपमा अघि बढेको थियो । तर, १४औँ महाधिवेशन एजेन्डा, विचार र दस्तावेजका हिसाबले विगतका महाधिवेशनजस्तो हुन सकेन ।
यस महाधिवेशन विचारभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित भएको आरोप कांग्रेसले सहज रूपमा स्विकार्नुपर्छ । महाधिवेशनको समयमा उम्मेदवारका दस्तावेजमाथि वैचारिक छलफल र बहसभन्दा पनि विज्ञापन र पर्चाहरू मात्रै छरिनुले कांग्रेस आफ्नो पार्टी जीवनको इतिहासमै पहिलो पटक समाजका जटिलताहरूप्रति अस्पष्ट भएको र रणनीतिक योजनासहित ठोस निष्कर्षमा पुग्न नसकेको पनि हामीले स्विकार्नुपर्छ । यो अस्पष्टतालाई चिन्न र चिर्न ढिलाइ गरियो भने कांग्रेसले निकट भविष्यमा जटिल चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने निश्चितप्रायः छ ।
हिजो आफैंले गरेका प्रश्नहरूको चित्तबुझ्दो उत्तर कांग्रेसले खोज्नुपर्छ र त्यो उत्तर विनम्रतापूर्वक जनतालाई दिनुपर्छ । आम कार्यकताले प्रकट गरेको कांग्रेस रूपान्तरणको उत्कट अभिलाषाले निर्वाचित नेतृत्वलाई यथास्थितिमा रहिरहने छुट दिँदैन । अर्थात् प्रश्न गर्नेहरूलाई उत्तर दिने ठाउँमा पुर्‍याएका पार्टी कार्यकर्ता र आम जनताले चित्तबुझ्दो जवाफ पाउनुपर्छ । उत्तर खोज्न सहज छैन, तर प्रश्नको सामना नगरीकन पन्छने छुट पनि अबको नेतृत्वलाई छैन ।
बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा संश्लेषित प्रजातान्त्रिक समाजवादले व्यक्तिको हकमा समेत निश्चित प्रकृतिको चरित्रको माग गर्छ । त्यसैले हामीले कांग्रेस नेता तथा कार्यकर्ताको सवालमा चाहिने व्यक्तित्वमाथि समेत विमर्श गर्न ढिला भइसकेको छ । बहसबिनाको लोकतन्त्र कल्पना गर्नसमेत सकिँदैन, त्यसैले हामीले महाधिवेशनमा देखिएका सम्पूर्ण कमजोरीमाथि वस्तुसंगत विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा कांग्रेसलाई अझै प्रखर र स्पष्ट बनाउनु जरुरी छ ।
स्थानीय साथै प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन संघारमा आइपुगेको छ । यसभन्दा अघि कांग्रेसबारे जनतामा धारणा लैजाने काम कम्युनिस्टहरूले बढी गरे । उनीहरूले नकारात्मक रूपमा चित्रण गरेकाले खास अर्थमा कांग्रेस के हो भन्ने भाष्य स्वयं नेपाली कांग्रेसले आम तहमा लैजानुपर्नेछ । त्यसका लागि वैचारिक र कार्यदिशागत स्पष्टता आवश्यक छ । हामीले लोकतन्त्रलाई कसरी बुझिरहेका छौँ र एक्काइसौँ शताब्दीको लोकतन्त्र कस्तो हुनुपर्छ ? आज लोकतन्त्रमाथि मडारिएका चुनौती के हुन् र त्यसलाई कांग्रेसले कसरी सम्बोधन गर्नेछ ? नेपाली समाजमा विभिन्न उत्पीडनहरू खप्टिएर रहेका छन् र एक–अर्कासँग गाँसिएका यस्ता उत्पीडनको अन्त्य नेपाली कांग्रेसले कसरी गर्न खोजिरहेको छ ? यसबारे हामीसँग दलित, महिला, मधेसी, भूमिहीन, किसान, जनजाति, अल्पसंख्यक, फरक क्षमता भएका व्यक्ति साथै लैंगिक अल्पसंख्यकलाई दिने जवाफ हुनुपर्छ ।
नेपाली कांग्रेसलाई उठ्ने प्रश्नमध्ये सरकार सञ्चालन गर्दा उसले लिने गरेका आर्थिक नीतिहरू मुख्य रहँदै आएका छन् । हामीले लिने आर्थिक नीति कस्तो हो र त्यसबाट सबैभन्दा बढी लाभान्वित हुने जनसंख्याको हिस्सा कुन हो ? भर्खरै काठमाडौँ सहर विश्वकै अति प्रदूषित सहरमा दर्ज भएर संसारभर बदनाम भयो ।
विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण आज हिमालहरू पग्लिरहेका छन् । हामीले पर्यावरणीय संकटलाई अनदेखा गर्नै मिल्दैन । पुँजीवादी अर्थप्रणालीको सहउत्पादनका रूपमा आएको पर्यावरणीय संकटलाई समाधान गर्ने कांग्रेसको वैकल्पिक मोडल के हो ? प्रविधिमा संसारले ठूलो फड्को मारिरहेको छ, त्यसका सकारात्मक र नकारात्मक दुईवटै पाटा छन् । बायोटेक, इन्फोटेक र आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको बहस घनीभूत रूपमा उठिरहेको छ । यसले हाम्रोजस्तो तथाकथित तेस्रो विश्वको श्रम बजारमा ठूलो असर पार्ने निश्चित छ । हाम्रै अगाडि आइसकेको यो संकटलाई कांग्रेस कसरी हल गर्न चाहन्छ ? आप्रवासी मजदुरका कथाव्यथा आफ्नै छन्, गाउँ मलामीसमेत नपाउने गरी रित्तिएको छ, युवाहरू आफ्नो रगत र पसिना अरबको भूमिमा बगाइरहेका छन्, आप्रवासी मजदुरलाई दिने कांग्रेसको जवाफ के हो ? अहिले चलिरहेको विकासको केन्द्रमा मान्छे होइन, भौतिक निर्माण मात्रै छ ।
मानवीय चाहनालाई सम्बोधन गर्ने पर्यावरणमैत्री र सम्पदामैत्री विकासको खाका के हो ? शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायातमाथि चरम व्यापार चलिरहेको छ, असमानता बढिरहेको छ । सार्वजनिक यातायात अपांगता भएका व्यक्ति र महिलामैत्री हुन सकेको छैन । यी सबै समस्यालाई प्याकेजमा हल गर्ने कांग्रेसको दृष्टिकोण के हो ?
यी र यस्ता कैयन गहन सवालहरूको हल महाधिवेशनबाट निर्वाचित टिमले कांग्रेसका लाखौँ कार्यकर्ताका बीचबाट खोज्नुपर्नेछ । के हामी आत्मगत रूपमा त्यसका लागि तयार छौँ ? यदि छौँ भने चौधौँ महाधिवेशनबाटै कांग्रेसले नयाँ जीवन प्राप्त गर्नेछ । होइन भने महाधिवेशनहरू आउँछन् र जान्छन्, चुनाव पनि आउँछन् र जान्छन् तर नेपाली समाजका समस्या ज्युँका त्युँ रहन्छन् । समस्या सुल्झाउने ल्याकत राख्ने आत्मविश्वास लिँदै आजैका समस्यामाथि आजै चिन्तन र विमर्श गर्ने परिपाटी नेपाली कांग्रेसले स्थापित गर्नुपर्छ ।
प्रकाशित : पुस १२, २०७८ ०८:०७